ရွှေဖရုံသီး ၅၀၀ ဂရမ် ( တစ်စိပ် )
ရေချိုပုစွန်ဘော့ချိတ် ၂၅ ကျပ်သား
ငရုပ်သီးပွခြောက် ၅ တောင့်
အရသာမှုန့်၁ စွန်း
ငါးငံပြာရည် ၁ လ္ဘက်စွန်း
ရေသန့်၂၀၀ မီလီလီတာ
၁ ။ ရေချိုပုစွန်ဘော့ချိတ် ကို အခွံနွှာ သန့် စင်ပြီး ရွှေဖရုံသီး ကိုလည်း သန့် စင်ရျွ် သုံးမြှောင့်ပုံ ၁ လက်မ အရွယ်ခန့် လှီးထားပါ။
၃ ။ ပဲဆီသန့် ကိုအပူပေးပြီး အသင့်ထောင်းထားသော ငရုပ်သီးအနှစ် ကို နနွင်းမှုန့် ၊ နံနံပင် အရိုးအနည်းငယ် တို့ နှင့် ဆီသတ် ထား
၄ ။ ငရုပ်သီးအနှစ်ကျက်လျှင် ငါးငံပြာရည် အနည်းငယ်ထည့်ဆီသတ်ပြီး အသင့်သန့်စင်ထားသော ရေချိုပုစွန်ဘော့ချိတ် ကို ထည့်ချက်ရျွ် ၂ မိနစ်ခန့် ငရုပ်သီးအနှစ် နှင့် ဆီသတ်ပေးပါ။
၅ ။ ရေချိုပုစွန် အနည်းငယ်ကျက်လျှင် အသင့်လှီးထားသော ရွှေဖရုံသီး ထည့် ချက်ပြီး ၂ မိနစ်ခန့် ဆီသတ်ပါ ၊ ရွှေဖရုံသီး အနည်းငယ်မွှေးလာလျှင် ရေသန့် ထည့်ချက်ပေးပြီး အရသာ ကို ဆား ၊ ငရုပ်ကောင်းမှုန့် ၊ အရသာမှုန့် တို့ ဖြင့်ထိမ်းညှိရျွ် အဖုံးအုပ်ပြီး ၂၀ မိနစ် ခန့် ချက်ပေးပါ။
၆ ။ ရွှေဖရုံသီး နူးလျှင် ရှမ်းနံနံ အနည်းငယ်ထည့်ချက်ပေးပြီး ရှမ်းနံနံ အညွှန့် ဖြင့် အလှဆင်တည်ခင်းပါ။
Pumpkin with Fresh River Prawn Stew.
Fresh River Prawn 400 g
Seasoning Powder 1 tbsp
Coriander Stemalittle
Saw-Corianderalittle
Peeled the Fresh River Prawn and clean then wash the pumpkin and cut into triangle shape about 1 inch size and put aside.
Soak the Dried Chili in hot water and pitted all seeds , then pound or blend the Dried Chili with some Ginger, Garlic and Onion until smooth as paste.
Heat up the Peanut Oil in pot and sauté the Chili Paste with some Ground Turmeric and coriander Stem till get flavor and aroma.
When Chili Paste get aroma add in some Fish Sauce and sauté forawhile then add in Fresh River Prawn and stir for2minutes.
When Fresh River Prawn get flavor then add in Pumpkin and stir for2minutes and pouring some water and seasoning with Salt, Crushed Black Pepper, Seasoning Powder and cover and cook for 20 minutes until Pumpkin get soft and tender.
When Pumpkin get soft and tender just Garnish and flavor with some saw-coriander leaves and serve.